Shiinaha Sare Shirkadaha Shiinaha PVC PVC Nasal Airway / Nasopharyngeal Airway warshad iyo shirkado cusub | Biotek
Xeerka alaabta: BOT 128000
Hordhac: Nasopharyngeal Airway waa tuubbo loogu talagalay inay bixiso marin hawo-mareen ah oo ka yimaada sanka ilaa iyo xiiqda dambe. Nasopharyngeal Airway wuxuu abuuri karaa wadiiqad patent wuxuuna kaa caawin karaa kahortaga marin hawo mareenka sababo la xiriira unugyada dhiig karka. Marinka Nasopharyngeal wuxuu marina hawo-mareen patent ah masaafada tuubada oo dhan. Nasopharyngeal Airway waa la jabin karaa haddii marinka sanku cidhiidhi yahay oo uu dumo dhexroorka hoose ee Nasopharyngeal Airway sidoo kale waxaa lagu xiri karaa dhamaadka fog. Patency waa hadafka koowaad ee Wadada Nasopharyngeal. Ogsijiinta waxaa lagu horumarin karaa iyadoo la adeegsanayo daboolka sanka ee Nasopharyngeal Airway. Ogsijiin waxaa sidoo kale lagu bixin karaa iyadoo la marinayo sanka sanka ee gudaha Nasopharyngeal Airway
Codsiga: waxaa loo adeegsadaa fududeynta nuugista inta lagu jiro daryeelka degdegga ah, suuxdinta guud, iyo sidoo kale bixinta hawo-mareenka kale inta lagu jiro xaaladaha degdegga ah.
Cabbirka: 3mm ilaa 9mm oo la heli karo;
1.Made oo ah maaddada darajada caafimaadka, iyo cinjirka 'latex';
Dusha sareSooms ogolaado gelinta fudud;
3. Talo wareegsan oo loogu talagalay raaxada bukaanka;
4. Ku habboon bukaanada da 'kala duwan leh.
Marin-haweedka Nasopharyngeal waxaa loogu talagalay gelitaan fudud iyo raaxada bukaanka ugu badan. Waxay fududeeysaa nuugista daryeelka degdegga ah, suuxdinta guud waxayna sidoo kale bixisaa marin hawo mareen kale inta lagu jiro howlaha degdegga ah.
1. Marin haweedka Nasopharyngeal wuxuu ka sameysan yahay darajada caafimaadka ee PVC.
2. Waxaa lagu heli karaa iyada oo DEHP LACAG LA'AAN
3. Maamulka sanka loo yaqaan "ariari management".
4.Waxaa la jiri karaa fool-maroodi cad, buluug ama midab cagaaran oo hufan.
5. Buunka weyn waa la heli karaa.
6. Waxaa lagu heli karaa shahaadooyinka CE, ISO.
Hore: Maskaxda Laryngeal Mask (Silicone)
Xiga: Baaritaanka Heerkulka la tuuro iyo Sensor-ka SPO2 la tuuro